Richard Stallman: "Anyị ga-ewepụ ike na azụmaahịa" | Site na Linux
Richard Stallman: "Anyị ga-ewepụ ike na azụmaahịa"
N'ajụjụ ọnụ na-enweghị n'efu rụrụ na mmemme "Day Tripper" nke redio «Rock & Pop», RMS kwuru okwu banyere atụmatụ "Jikọọ Nhata" nke ọ kpọrọ "Ikpe ajọ omume ikpe," wepụtara Microsoft & Facebook, wee mee ụfọdụ nkọwa izugbe gbasara ịntanetị, ọchịchị onye kwuo uche ya, ikeketeorie, porn, na ndị ọzọ.
Ndị ụlọ ọrụ ahụ nwere mmetụta pụrụ iche na ndọrọ ndọrọ ọchịchị pụtara na ọchịchị onye kwuo uche ya na-arịa ọrịa. Ebumnuche ochichi onye kwuo uche ya bụ iji hụ na ndị ọgaranya enweghị mmetụta dabara na akụnụba ha. Ma ọ bụrụ na ha nwere mmetụta karịa gị ma ọ bụ gị, nke ahụ pụtara na ọchịchị onye kwuo uche ya na-akụ afọ n’ala. Iwu ha nwetara n'ụzọ dị otu a enweghị ikike omume, kama ọ bụ ikike imerụ ahụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Faịlụ FileLet jiri » Richard Stallman: "Anyị ga-ewepụ ike na azụmaahịa"
N'agbanyeghị isiokwu Stallman, enweghị m mmasị na ya, yana GPL ya, ọ na-emetụ m dị ka ikikere ihu abụọ. Nnwere onwe bụ ihe o kwuru
onye na-eme ihe nkiri dijo
Typedị foto ahụ "Che" ... ka anyị dokwuo anya na ọ bụ ihe ọchị.
Zaghachi na onye ozo
Crack Stallman. Daalụ maka post.
ル ク マ ン dijo
auch echere m na onyonyo a bu maka avatar xD
Zaghachi ル ク マ ン
Enwere m nkwado maka Stallman, naanị otu nsogbu bụ na m na-agba mbọ ịlụ ọgụ megide iji sọftụwia nwere ikike, mana ọ dị nwute na enweghị m ike ịkwụsị iji ụfọdụ ọrụ bara uru karịa ịgwa ndị enyi m okwu.
Coureage, gịnị mere i ji kwuo otú ahụ? gịnị bụ ihu abụọ?
Ee ụmụ okorobịa ... ị ga-enwerịrị ihe ọchị.
GPL na-ekwu na ị nwere ike ịhụ koodu ahụ, mana ị ga-enye ndị nrụpụta ikike na GPL ma ị nweghị ike imechi ya. Site na enweghị ike imechi ya na / ma ọ bụ gbanwee ikike ahụ, ọ naghị enye gị nnwere onwe niile n'ụwa.
A na-akpọ ezi nnwere onwe BSD, BSD na-ekwu na ị nwere ike ịme ihe ọ bụla ịchọrọ na ngwanrọ
Ee, mana kpomkwem ihe ọ na-ekwe nkwa bụ na ọ na-anọgide n'efu, n'ihi na ikikere dịka BSD na-enye gị ohere imechi ndị nkwekọrịta, yabụ mmadụ nwere ike parasitize koodu.
Ọ bụ oké ma ọ dị ka a na-ekwu okwu robot !!
Anaghị m ekwenye kpamkpam na nkà ihe ọmụma RMS nke ndụ, echere m na ọ na-ekwupụta ọnọdụ dị oke egwu nke na-adịghị adaba na eziokwu ma karịa ebumnuche ya, ọgụ megide itinye ego na nchekwa nzuzo mgbe thentanetị n'onwe ya agaghị enwe ike na-enweghị ya, Ugbu a, otu ihe doro anya na nke ahụ bụ na ike dabere na akụ na ụba bụ ihe ruru unyi, nke ruru unyi, mana ịmalite ịkọwa n'etiti Free Software, ikeketeorie na kọmunist abụghị ihe ngwọta, ma ọ bụ yabụ echere m ...
Nke a bụ Guillermo.
Obi ike: ikikere nke na - enye gị ohere ime “ihe ọ bụla ịchọrọ” na sọftụwia ahụ enweghị isi. Ọ bụrụ otú ahụ, ọ nweghị ikike ga-achọ.
Echere m na ndị nkatọ Stallman na GPL na-emegharị nnwere onwe na ịkwa iko. Iji nweere onwe gị ịchọrọ ụdị nchebe iwu, ikike kamakwa ọrụ, wdg. Nnwere onwe "anaghị eme ihe ị chọrọ." Dị ka Guillermo na-arụ ụka n'ụzọ ziri ezi, Achọrọ maka ụdị ụdị GPL 3 iji chebe ọrụ enweghị mmasị nke ọtụtụ puku mmadụ ka onye dị ndụ na-arụ ọrụ nwere ike ịkwado ọrụ a ma "mee ya nke ha" (site na echiche iwu).
Stallman nwere ike iyi obere ihe na ụfọdụ nkwupụta ya. Ha kwuru otu ihe banyere ya na 80s mgbe o kwuru banyere ohere nke ịmepụta ngwanrọ n'efu. Ọtụtụ n'ime ihe ndị ọ lụrụ ọgụ (tinyere ọtụtụ ndị sonyeere ya) bụ ndị a na-eche echiche dị ka ndị na-enweghị isi na ndị na-agaghị ekwe omume. N'ihi nkwupụta ya na-adịgide adịgide, ọ na-akpọ anyị òkù ịrụ ọrụ n'ụzọ ziri ezi. Mkpesa ya na nke ndị na-eso ụzọ ya, n'etiti ọtụtụ ihe ndị ọzọ, enyela aka na ụlọ ọrụ na-ewere nzuzo nke ndị ọrụ karịa nke ọma, na-ahụghị sọftụwia n'efu na anya ọjọọ dị otú ahụ, wdg.
Echere m na anyị ji ya ụgwọ nkwanye ugwu. Ọ bụrụ na ọ dị gị ka ọ dị egwu
okwu ya, echere m na anyi kwesiri iwere ha dika mkpali ma obu
mmiri na-achọsi ike.
Iacobellis onye Kristian dijo
Ekwenyere m na agụmakwụkwọ Software n'efu dị ezigbo mkpa maka ụmụ akwụkwọ ụlọ akwụkwọ praịmarị, ebe ọ bụ na ha bụ ndị ga-abụ ndị ọrụ zuru oke nke sistemu echi. Nsogbu a banyere Soft Libre ọzụzụ bụ na Mahadum ga-ewe nnukwu ego iji zụọ ndị chọrọ inweta ihe ọmụma na ngalaba a. Azịza ya dị mfe: ANY ALL KWES HAVER TO KWESITR AND KWES ANDR AND KWES FORR FOR KWES FORR FOR N'WITHLỌ, N'IME ỌZỌ ORFỌD OR NT ORR OR MA Ọ B THE GỌỌNỌ ỌRTS N'TSLỌ N',LỌ N'FREELỌ !!! na ụlọ ọrụ ndị dị ka CENTRALTECH, LINUX ACADEMIES, NA ỌZỌ, NA-EJU EGO 5000 PESOS A NA-EME NKỌR SO THATB YOUR YOU YOU B DOWNLOAD N'DOWNLOADLỌ Ntanetị, EB NOTGHON ONLỌ NKE EDLỌ AKW !!KWỌ !!
Zaghachi Iacobellis Christian
Ekwenyere m na akụkụ gị ... karịsịa n'okwu banyere ike akụ na ụba, nke bụ ihe na-akpata ọtụtụ nsogbu ugbu a ... mana n'ime nsogbu a bụ anyaukwu, nke na-eduga n'achụmnta ego ziri ezi. gbanwee usury na mkparị. Na mkpokọta, ihe merenụ bụ na amachibidoro ọrụ iji chebe nwa amaala, n'oge ike ọkachasị nke ndị oke-ikike (ndị Republicans na USA, ndị na-achọghị mgbanwe na mba ndị ọzọ) ewepụla iwu iji nweta ikike akụ na ụba nke nwa amaala. nkịtị,
N'uche m, ịlaghachi n'echiche ahụ, opekata mpe n'ụzọ onye kwuo uche ya….
Banyere sọftụwia na - akwụghị ụgwọ, ekwenyeghị m nke ukwuu ebe ọ bụ na anyị ga - eche etu otu sọftụwia dị mkpa ga - esi dịrị na ndụ ndị mmadụ ... Aghọtara m na ọ bụ akụkụ nke ndụ anyị mana anaghị m ahụ nnukwu mkpa iji nwee mmụọ banyere ya.
Otherbọchị ọzọ m na-arụ ọrụ na ngwa weebụ na ihuenyo zuru oke na ihe nchọgharị ahụ ... na enwere m nsogbu ụfọdụ mgbe m wepụrụ ihuenyo zuru ezu achọpụtara m na m na-arụ ọrụ na Kububtu mgbe m ji n'aka na m na-eji Windows n'oge ahụ ... mgbe ahụ n'ikpeazụ ihe dị mkpa bụ na mmadụ na-eme kọmputa yana ọ bụghị ụdị ngwa ọ bụla ma ọ bụ ụdị gịnị ka ị na-eji ... na maka ihe ụfọdụ ọ ka mma iji sọftụwia nwere nke dị njọ? Dịka Stallman na-ekwu, gịnị dị njọ na ịkekọrịta otu sọftụwia nke aka ya? Maka m software a dị mkpa tupu ... ọ bụghị ugbu a.
Mkpọchi: Ekwenyere m na ihe ị chọrọ.
Ọ bụ eziokwu na sọftụwia nwere ike ọ gaghị adị mkpa na ndụ anyị. O doro anya na nnwere onwe gafere n'ụzọ ọzọ, nri? N’ezie, dịka ezigbo Marxist, mmadụ na-eche ozugbo maka mmekọrịta klaasị, mmekọrịta gọọmentị, wdg.
MGBE ọ bụla, ọ bụkwa eziokwu na ọtụtụ n'ime mmekọrịta ndị a na-enwewanye mmetụta site na ịgbakọ. Ọ bụghị eziokwu na anyị na-etinye nnukwu akụkụ nke ụbọchị site na iji ngwa elektrọnik (ekwentị, kọmpụta n'ụlọ, kọmpụta n'ọrụ, wdg, wdg)? Kedu ka ngwanrọ ahụ si emetụta mmekọrịta anyị na klas anyị, ọrụ anyị, mmekọrịta mmegbu / nnwere onwe dị iche iche na-esite n'aka anyị dị ka ọha mmadụ? N'ihi ya, ekwenyere m na ọ dị mkpa ịbịaru Stallman nso.
Chrome 15 na-ewebata redesign na taabụ ọhụrụ